दुलही जस्तै लुगा लगाएर हातमा फूलहरुको गुच्छा बोकेर कब्रिस्तान जान लगेकी युवतीको बास्तबिकता थाहा पाएर मानिसहरु आँसु झार्न थाले ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / दुलही जस्तै लुगा लगाएर हातमा फूलहरुको गुच्छा बोकेर कब्रिस्तान जान लगेकी युवतीको बास्तबिकता थाहा पाएर मानिसहरु आँसु झार्न थाले !
दुलही जस्तै लुगा लगाएर हातमा फूलहरुको गुच्छा बोकेर कब्रिस्तान जान लगेकी युवतीको बास्तबिकता थाहा पाएर मानिसहरु आँसु झार्न थाले !
admin4weeks ago जीवनशैली Leaveacomment 116 Views
एजेन्सी । जब एक महिला दुलही जस्तै लुगा लगाएको र हातमा फूलहरुको गुच्छा बोकेर कब्रिस्तानको उदास अनुहार लगाएर जाँदै थिइन् । उनलाई देखेर सबैजना छक्क परे। २० वर्षीय युवकको मृत्युपछि अन्त्येष्टि प्रक्रिया चलिरहेको थियो। मानिसहरु दुलही जस्तै आएकी यो केटीलाई हेर्न थाले तर जब सत्य प्रकाशमा आयो, मानिसहरु आँसु झार्न थाले।
वेबसाइट द सनको रिपोर्टका अनुसार बेलायतको लाइमेरिकको एस्केटन कब्रिस्तानमा दुलहीको रुपमा लुगा लगाएर आएकी युवतीको नाम केट क्विलिगेन हो। यो खबर छ कि केट उनको २० वर्षीय प्रेमी माइल्स माइली संग विवाह गर्न जाँदै थिइन्। विवाहको लागी सबै तयारीहरु चलिरहेको थियो, बीचमा एक धेरै दुखद घटना भयो।
आयरल्याण्डको लाइमरिकस्थित सेन्ट मुन्चकिन चर्चमा यो जोडीको बिहे हुने थियो। माइल्स माइली विवाहका लागी आफ्नो कारमा चर्च आउँदै थिए। बाटोमा एक भयानक सडक दुर्घटना भयो जसमा उनका प्रेमीको निधन भयो । माइल्स कारको अगाडिको सीटमा सवार थिए ।
यद्यपि पुलिसले यो दुर्घटना पछि चालकलाई गिरफ्तार गर्‍यो, अर्कोतर्फ, जब दुलही विवाहको तयारीको बीचमा यो दुर्घटनाको बारेमा थाहा भयो, उनको होश उडयो। दुलही केट क्विलिन्जेन माइल्सको मृत्यु पछि उनी आफ्नो पतिलाई बिदाइ गर्न बिहेको पोशाक लगाएर कब्रिस्तान पुगिन्। केट माइल्स को फोटो देखेर रोएको देखेर सबै भावुक भए।
केट क्विलिगेनका बुबाले भने कि ‘छोरी माइल्सलाई धेरै माया गर्थिन् र आफ्नो बाँकी जीवन उनीसंग बिताउन चाहन्थिन्। आफ्नो मंगेतर लाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै केटले फेसबुकमा लेखिन् यो मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन दिन हो तर मलाई थाहा छ कि तपाइँ सधैं मेरो साथमा हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ कि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि मैले के सोचेको छु।’ केटले लेखेकी छिन् ‘म तिमीलाई सधैंभरि माया गर्नेछु, मलाई आशा छ कि यो बिदाई गर्ने समय हुन सक्छ, तर एक दिन हामी पक्कै भेट्नेछौं।’
Previous पहिरोले खोला थुनियो: बाढीले डाइभर्सन बगायो, ६ जनाको मृत्यु
Next कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो ह,र्कत गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए !
पुरुषलाई छिटै आकर्षित गर्न सक्छन् यी ४ राशि भएका महिला
हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ कि आफ्नो गुणबाट अरु मानिस आफूप्रति आर्कषित हुन्। ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही …